Odayaal soo dhaweeyey Wasiirada Cusub Ee Maamulka Galmug. – idalenews.com
Odayaal soo dhaweeyey Wasiirada Cusub Ee Maamulka Galmug.
Odayaasha Dhaqanka Maamulka Galmudug ayaa soo dhaweyey Tilaabadii Madaxweynaha Mamaulka Galmudug uu ku soo Magacaabay Wasiirada Cuusb ee Maamulka.
Nabadoon Yaasiin Max’ed Gaani oo ah Afhayeenka Odayaasha Maamulka Galmudug ayaa Keymedia online u sheegay in ay soo dhaweynayaan Magacaabista wasiirada Cusub,hadii ay yihiin Odayaasha Guurtiga Galmudug.
“Madaxweynaha Wasiiro tayo leh oo ay ka dhex muuqdaan Bulshada Reer Galmudug ayuu soo Xulay,waan ku dhiiri galineynaa Tilaabadaas Geesinimada leh,hana lala shaqeeyo Xukumadda Cusub”ayuu yiri Afhayeen Gaani.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale “Qeybdiid” ayaa shalay soo magacaabay ilaa iyo 12 Wasiir oo u badan Wasiiro Cusub,inkastoo ay ku jiraan ilaa Afar Wasiir oo Wasiiradii la kala Diray ka mid ahaa.
Sidoo kale Bulshada Galmudug ee Deeganada Galmudug ku nool ayaa soo dhaweyey Wasiirada Cusub ee Maamulka galmudug State.